MODA | Article Detail | အလှကုန်ဆိုင်တွေမှ အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ ရနိုင်မယ့် Make up Remover ကောင်းကောင်းများ
အလှကုန်ဆိုင်တွေမှ အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ ရနိုင်မယ့် Make up Remover ကောင်းကောင်းများ
သာမာန် မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာတွေက ပျိုမေတို့ရဲ့ အရေပြားထဲထိ အညစ်အကြေးတွေကို မသန့်စင်နိုင်ပါဘူး။
နေ့စဉ် ရုံးသွား၊ ကျောင်းသွားနဲ့ အပြင်ထွက်နေရတဲ့ပျိုမေတို့ နေ့ဘက်တွေမှာ တစ်နေကုန် မိတ်ကပ်လိမ်းထားပြီး ညဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ မိတ်ကပ်တွေကို မျက်နှာပေါ်မှာ မကျန်စေဘဲ ဖျက်ပစ်မယ်ဆိုရင်တော့ နည်းလမ်းလေးတွေ သိဖို့လိုပါတယ်နော်။ တစ်နေကုန်လှုပ်ရှားသွားလာနေကြတဲ့ ပျိုမေတို့ရဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းထားတဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ ဖုန်နဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ကပ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒါတွေကို စင်ကြယ်အောင် မသန့်စင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ပျိုမေတို့ရဲ့ မျက်နှာလှလှလေးမှာ အဆီဖုတွေနဲ့ ဝက်ခြံတွေ ထွက်လာပြီး အသားအရေလည်း မဲညစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သာမာန် မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာတွေက ပျိုမေတို့ရဲ့ အရေပြားထဲထိ အညစ်အကြေးတွေကို မသန့်စင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မျက်နှာမသစ်ခင်မှာ Make up remover လေး သုံးပေးဖို့လိုပါတယ်နော်။ ကဲ ဒီတော့ ဘယ် Make up remover က ပျိုမေတို့ရဲ့ skin type နဲ့ ကိုက်ညီလည်းဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Maybelline Make up Remover က Water Proof မိတ်ကပ်များကိုပါ အလွယ်တကူ သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် နူးညံ့ပြီး Sensitive ဖြစ်သော မျက်လုံး အသားအရေ ပိုင်ရှင်များပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ္။
အသုံးမပြုခင် ဘူးကို သေချာစွာ လှုပ်ပြီး ဂွမ်းသန့်သန့် နှင့် ဖြည်းညင်းစွာ ပွတ်ပြီးနောက် မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ မိတ်ကပ်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖျက်ရခက်တဲ့ eye-liner နဲ့ mascara တွေကိုပါ လွယ်ကူစွာနဲ့ ဖျက်ပစ်နိုင်တာမို့ ပျိုမေတို့ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါနော်။
မျက်နှာလေးတော့ သန့်စင်ချင်ပါရဲ့ မျက်နှာသစ်ဖို့ အပျင်းထူတတ်ကြတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water လေးကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။ ချွေးပေါက်ထဲ ပိတ်မိနေတဲ့ မိတ်ကပ်အညစ်အကြေးတွေကို ထိရောက်စွာသန့်စင်ပေးနိုင်တာကြောင့် ဝက်ခြံပြသနာတွေကိုပါ ကင်းဝေးစေပါတယ်။ လေးလာပါပြီ။ အချိန်အတော်ကြာခံအောင်လိမ်းထားတဲ့ Waterproof မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကို အဆီပါဝင်တဲ့ Cleansing Water ထဲမှာပျော်ဝင်စေပြီး တစ်ချက်တည်းနဲ့ ညင်သာစွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Cleansing Water လေးပါနော်။
ပျိုမေတို့ရဲ့မိတ်ကပ်၊ နှူတ်ခမ်းနီ နဲ့ eye-liner တွေကို ပွတ်ဆွဲစရာမလိုဘဲ လုံးဝသန့်စင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် Pond’s Micellar Water က ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Vitamin B3 ပါဝင်လို့ မိတ်ကပ်ဖျက်ပြီးတာတောင် အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပနေစေမှာပါ။ မျက်နှာပေါ်မှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်တွေက ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်း၊ အဆီပြန်ခြင်းနဲ့ ဝက်ခြံတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့် ဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Pond’s Micellar Water ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ပျိုမေတို့လည်း မိမိတို့အသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ make up remover ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့် မျက်နှာပေါ်မှာ အညစ်အကြေးတွေ မကျန်ခဲ့စေဖို့အတွက် အသုံးပြုလိုက်ကြရအောင်နော်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်စပ်မှူရှိနေတယ်ဆိုမမှားပါဘူး အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ စိတ်ဖိစီးမှူများနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ သိသိသာသာ ရုပ်ကျသွားတာမျိုး ၊ အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်တာမျိုးအထိ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှူနဲ့ စိတ်ကျခြင်းတွေမဖြစ်ဖို့အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှူတွေ ၊ ကုစားမှူတွေနဲ့ ဘယ်လို ပြသနာအခက်အခဲပဲကြုံလာလာ ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်မယ့် ကာကွယ်မှူမျိုးတွေကို အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ကြိုတင်မွေးမြူထားသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍များ စိတ်ကျလို့ ရုပ်မလှတော့ဘူးဆိုရင် အဘက်ဘက်ကဆုံးရှူံးနစ်နာရမှာက ကိုယ်တိုင်ပဲမို့ စိတ်ဓာတ်မကျပဲ ရုပ်လှစေဖို့အတွက် စိတ်ကျခြင်းက ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ အလှအပဆိုင်ရာဆိုးကျိုးလေးတွေကို သတိပြုမိအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
စိတ်ညစ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် အသိသာဆုံးထိခိုက်နိုင်တဲ့အချက်ကတော့ အရေပြားလို့ယေဘုယျအားဖြင့်သိထားကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ ဦးခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ဦးရေပြားဟာလည်း စိတ်ကျခြင်းတွေရဲ့ဒဏ်ကို သိသိသာသာခံရတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။ ဆံပင်တွေပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ကျွတ်လာပြီဆိုရင် ကိုယ်ဘယ်လောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှူတွေရှိနေပြီလဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ၊ ခွဲစိတ်မှူတစ်ခုခံယူပြီးချိန် ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံရတဲ့အချိန် နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှူတွေများတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ ဆံပင်တွေသိသိသာသာကျွတ်လာတာကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စိတ်ကို ဖြေလျော့နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ကို ပြန်လည်ကုစားသင့်ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှူကြုံနေပြီဆိုရင် ဆံပင်ကျွတ်ရုံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ ဦးရေပြားယားယံတာကစလို့ ဘောက်ထတာမျိုးတွေအထိကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာရပြီဆိုရင် စိတ်ကိုပြန်လည်ကုစားတာမျိုးအပြင် ကျွမ်းကျင်တဲ့အရေပြားအလှအပဆရာဝန်တွေညွှန်းတဲ့ ဦးရေပြားအားဖြည့် Cream ‌တွေ Shampoo လိုမျိုးတွေကိုလည်း အသုံးပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အရမ်းစိတ်ဖိစီးတဲ့အခါမျိုးမှာ အရေပြားယားယံတာမျိုး အင်ပြင်ထတာမျိုးတွေကို အများစုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဖြစ်နေကျထက်ထက်ပိုပြီး အရေပြားယားယံတာမျိုးပါ။စိတ်ဖိစီးလွန်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အရေပြားအောက်မှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေဟာ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး Sensitive ဖြစ်လွန်းတာကြောင့် ဒီလို နဂိုထက်ပိုတဲ့ အရေပြားယားယံမှူတွေဖြစ်ပေါ်လာရတာဖြစ်တယ်လို့ အရေပြားကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေကဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံလာရပြီဆိုရင် ရေနိုင်နိုင်ချိုးတာမျိုး ၊ အရေပြားလိမ်းဆေးတွေလိမ်းတာမျိုးမဖြစ်မနေပြုလုပ်ရပါမယ်။ ဒီလိုလုပ်လို့မှမသက်သာပဲပိုဆိုးလာရင်တော့ အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တွေဆီမှာ အကြံဉာဏ်တောင်း ကုစားဖို့လိုပြီလို့ဆိုပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးလွန်းတဲ့အခါ သနားစရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာအရေပြားလေးက အဲဒီဒဏ်တွေကို တော်တော်လေးဒဏ်ခံရပါတယ်။ ဝက်ခြံတွေထွက်တာမျိုး Breakouts ဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီး အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ကုသနိုင်မှ တော်ကာကျမယ့်အခြေအနေပါ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ ကိုယ့်အတွက်စိတ်ကိုသက်သာရာရစေမယ့် ခရီးထွက်တာမျိုး ၊ တရားထိုင်တာမျိုး၊ ပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာမျိုးတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးပြုလုပ်ပြီး စိတ်ကိုပြန်လည်ကုစားဖို့ိလိုပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှူကြောင့် အရေပြားခြောက်သွေ့လွယ်တာနဲ့ဆက်စပ်ပြီး အစိုဓာတ်နည်းသွားတဲ့အရေပြားဟာ အရေးအကြောင်းထလွယ်တာမျိုး အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းတာမျိုးတွေအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်လွယ်တဲ့သူတွေမှာ ရေဓာတ်ကို တခြားသူတွေထက်ပိုပြီးလိုအပ်တာကြောင့် ရေများများသောက်တာမျိုး အရည်ရွှမ်းတဲ့အစားအသောက်တွေစားတာမျိုးနဲ့ အစိုဓာတ်လိမ်းဆေးတွေကိုပုံမှန်အသုံးပြုပေးတာမျိုးတွေကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
Glass Skin အသားအရေပိုင်ဆိုင်စေမယ့် ကိုးရီးယားနာမည်ကြီး Facial Mask များ
Glass Skin ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် Mask လေးတွေ
အခြား Skincare Product တွေထက် Korea Face Mask တွေက မြန်မာအသားအရေနဲ့လည်း လိုက်ဖက်သလို ထိရောက်မှုလည်း တော်တော်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ပုံစံမျိူးစုံနဲ့ ရွေးချယ်စရာများတဲ့ ကိုးရီးယား Face Mask တွေက နိုင်ငံတကာမှာ လူကြိုက်များတာလည်း သိကြမှာပါ။ ကိုးရီးယား Skincare Product တွေကောင်းမှကောင်း ကိုးရီယားအမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်တာနဲ့ သိမှာပါ။ အသားအရေကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းကြပြီး သူတို့ရဲ့ K Product တွေကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲသုံးစွဲကြတာပါ။
Glass Skin ဆိုတာကလည်း ကိုးရီးယားနိုင်ငံက နာမည်ကြီး Beauty Trend တစ်ခုဖြစ်သလို အမျိူးသမီးတိုင်းလိုချင်တဲ့ အသားအရေအမျိူးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Skin ကိုရဖို့ ကိုးရီးယားအမျိူးသမီးတွေက Skincare Step 10 ဆင့်လောက်ကို ပြုလုပ်ကြပေမယ့်လည်း လိုက်လုပ်ဖို့က ထင်သလောက်မလွယ်ကူတော့ ဒီနည်းလမ်းက အသုံးဝင်မှာပါ။ Face Mask တွေဆိုတာက အသားအရေကို သိသိသာသာပြုပြင်ပေးပြီး ပုံမှန် အသုံးပြုသင့်တဲ့ Skincare Product တစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
ကိုးရီးယား Face Mask တွေ အများကြီးထဲကမှ ခုပြောပြပေးမယ့်ဟာလေးတွေက Glass Skin ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး Mask လေးတွေပါ။ အချိန်အများကြီးပေးစရာမလိုပဲ ကိုယ့်လုပ်နေကျ အလုပ်တွေ လုပ်ရင်းလည်း အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနိုင်တာမို့ လူကြိုက်များတာလည်း မပြောနဲ့လေ။
2. JayJun Intensive Shining Mask
3. Dr Jart + Dermask Brightening Mask
4. Dr Jart + Bright Lover Rubber Mask
5. Tonymoly I'm7Days Sheet Mask Set
6. Sulwhasoo First Care Activating Mask
7. Laneige Lavender Water Sleeping Mask
8. Dear, Klairs Freshly Juiced Vitamin E Mask
9. Innisfree Brightening Pore Sleeping Mask
10. Peach & Lily Original Glow Sheet Mask Set
ဈေးကြီး Product တွေသုံးစရာမလိုပဲ နှာခေါင်းပေါ်က ဆားဝက်ခြံတွေ သိသိသာသာသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း
နှာခေါင်းပေါ်က ဆားဝက်ခြံမဲမဲတွေက ကြည့်ရအရမ်းရုပ်ဆိုးပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ Skincare လုပ်လုပ်၊ ထွက်ချင်တဲ့အချိန်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ချွေးပေါက်တွေ ပိတ်ဆို့ပြီး ဖြစ်ပေါ်တာက Whitehead တွေဖြစ်ပြီး ချွေးပေါက်ကျယ်တဲ့သူတွေဆီမှာ ဖြစ်တတ်တာကတော့ ဆားဝက်ခြံတွေပါ။
ဆားဝက်ခြံတွေကို အထဲမှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးကြောင့် မဲနေတယ်လို့ ထင်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းကတော့ ဆဲလ်အသေနဲ့ အဆီတွေက ချွေးပေါက်မှာ ပိတ်သွားပြီး လေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာ အရောင်ပြောင်းလဲသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆားဝက်ခြံတွေအတွက် တကယ့်ကို ထိရောက်တဲ့ Homemade နည်းလမ်းတွေရှိလို့ အိမ်မှာပဲ အလွယ်တကူ လုပ်လို့ရအောင် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ထပ်ပြီး မထွက်လာအောင်လည်း ဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်လေးတွေကိုလည်း ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အလွယ်ကူဆုံး Mask လေးကို လုပ်ကြည့်ရအောင်။ Baking Soda နဲ့ ရေပဲလိုတဲ့ Mask လေးပါ။ Baking Soda က အသားအရေကို PH Balance ညီအောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး ဆဲလ်သေနဲ့ အဆီတွေကို ဖယ်ရှားပေးတာမို့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။ Baking Soda လက်ဖက်ရည်နှစ်ဇွန်းကို ရေလက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းနဲ့ မွှေပါ။
ဒီအရောအနှောကို မျက်နှာပေါ်မှာ Massage လုပ်ပြီး ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ပြန်သစ်လိုက်ပါ။ အစိုဓာတ်ဖြည့်ဖို့ ဒီ Mask ကပ်ပြီး Moisturizer တစ်မျိူးမျိူးလိမ်းပါ။ အသားအရေကို ခြောက်စေလို့ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါလောက်သာ ပြုလုပ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
သကြားအညို၊ ပျားရည်နဲ့ သံပုရည်အရောအနှောက ဆားဝက်ခြံတွေရှိတဲ့ နှာခေါင်းနဲ့ မေးစေ့တွေကို Exfoliate လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။ သကြားညို လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်းနဲ့ သံပုရာရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းနဲ့ ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၁ဇွန်းကို ရောမွှေပါ။ သမအောင် မွှေပြီးရင်တော့ အသားအရေပေါ်မှာ စက်ဝိုင်းပုံ သဏ္ဍန် ငါးမိနစ်လောက် နှိပ်နှယ်ပါ။
အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အားလုံးသိမယ့်နည်းလမ်းကတော့ ကြက်ဥအကာ ကိုအသုံးပြုတာပါ။ ကြည်ဥအကာကို ကိုယ်ပြုလုပ်ချင်တဲ့နေရာကို သုတ်လိမ်းထားပါ။ ပြီးတော့ တစ်ရှုးစကို အပေါ်ကနေ ကပ်လိုက်ပါ။ ကြက်ဥအကာနောက်တစ်ထပ်ကို ပြန်သုတ်ပါ။ မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီး Peeling Mask လို ခွာချလိုက်ရုံပါပဲ။ ဆားဝက်ခြံတွေ သိသိသာသာထွက်သွားတာတွေ့ရမှာပါ။
ဆားဝက်ခြံလည်း ဖယ်ရှားပြီး အသားအရေကြည်လင်ဖို့အတွက် နနွင်းမှုန့်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နနွင်းက ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ရောင်ရမ်းတာကို သက်သာပျောက်ကင်းစေလို့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန် နနွင်းမှုန့်က အရောင်စွန်းထင်းတက်လို့ Kasturi Turmeric ကို အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။ Kasturi Turmeric လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၁ဇွန်းကို အုန်းဆီ ဒါမှမဟုတ် ရေလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းနဲ့ ရောမွှေပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ ၁၀ မိနစ်၊ ၁၅ မိနစ်လောက်ထားပါ။ ပြီးရင်တော့ ရေဆေးချလိုက်ပါ။
ဆားဝက်ခြံပြန်ထွက်တာကို သက်သာစေဖို့ မဖြစ်မနေပြုလုပ်ရမယ့် အရာတွေရှိပါတယ်။
ဝက်ခြံကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ Product ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လို Skincare Product ပဲဖြစ်ဖြစ် အများကြီး မျက်နှာပေါ် မတင်သင့်ပါဘူး။ အသားအရေကို Overwhelm ဖြစ်စေပြီး ဆားဝက်ခြံတွေကို ပိုပြီး ထွက်စေနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် Basic Skincare အဆင့်ကိုသာ ပြုလုပ်သင့်ပြီး Moisturizer ကို မဖြစ်မနေလိမ်းသင့်ပါတယ်။
ဆားဝက်ခြံတွေကို တော်တော်များများက ကိုယ်တိုင်ပဲ မှန်ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ညှစ်ထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ လျော့ပါးသွားသယောင်ဖြစ်ပေမယ့် လက်နဲ့ကိုင်တွေ့တာ၊ ညှစ်တာတွေက အမာရွက်နဲ့ နီမြန်းမှုတွေဖြစ်ပြီး ပိုးဝင်နိုင်လို့ Dermatologist တွေနဲ့ သေချာပြပြီးမှသာ ဖယ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။